C/Wali Qanyare Oo yiri In Laydilo Ayaa Larabay Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
C/Wali Qanyare Oo yiri In Laydilo Ayaa Larabay Cod
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyey ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo ciidamada Xildhibaan C/Weli Maxamed Qanyare iyo kuwa Hogaamiye Kooxeed Cabdi Waal.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada nabad sugidda ay weerareen guriga Xildhibaan Qanyare kuna yaalla inta u dhexeeyso Garoonka Aadan Cadde iyo Hoteel Jasiira, halkaasi oo la sheegay inuu ku dhuumanayey Cabdi waal oo la doonayey in hub ka dhigis lagu sameeyo.
Waxaa la sheegayaa in ciidamada ay doonayeen in lasoo xiro Cabdi Waal oo mucaarad ku ah dowladda Sidoo kalana hub badan haysta, islamarkaana uu bad baaday kadib markii Howlgalkii ciidanka lagu diley Tiliyihii Hogaaminayey Ciidankii Nabad sugida.
Xildhibaan Cabdi Weli Qanyare, oo goor dhow la hadlay idaacadaha VOA , ayaa sheegay inuu ka bad baaday isku day dil iyo weerar ay kusoo qaadeen ciidamada dowladda, balse uu iska caabiyey ciidankii soo weeraray, waxaana uu intaas ku daray “Waa nasiib darro in dowladda Somalia ay arrintan ku kacdo”.
Taliyiha ciidamada nabad sugidda ee dagaalka hoggaaminayey oo lagumagacaabo Caydiid, ayaa lagu warramay inuu ku dhintay dagaalka, khasaarahana uu intaas ka badan yahay.